Inye Ike Supply Power, 50W 1200Ma Led Driver, Ike Ntanye Ike Ntanye Nye Ihe Ị Chọrọ
Nkọwa:Ike nnyefe Ike,50W 1200Ma Led Driver,Ike Enyemaka Na-arịwanye Elu,,,
Home > Ngwaahịa > Ọkwọ ụgbọala n&#39;èzí n&#39;èzí > Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ n&#39;okporo ámá
Ngwaahịa nke Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ n'okporo ámá , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ike nnyefe Ike , 50W 1200Ma Led Driver suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ike Enyemaka Na-arịwanye Elu R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Waterproof LED Driver 55W 1800mA  Kpọtụrụ ugbu a
277Vac 1.2A mmepụta nke ọkwọ ụgbọala ngosi 36W ugbu a  Kpọtụrụ ugbu a
IP67 Ọkwọ ụgbọala na-agba 100W Maka ìhè obodo nke obodo  Kpọtụrụ ugbu a
transformer switch switch Dimmable Driver 100W  Kpọtụrụ ugbu a
150W IP Rated Aluminom Didan Ọkwọ ụgbọala 0-10V dimming  Kpọtụrụ ugbu a
240W Ọkwọ ụgbọala Aluminom dị na IP nke 0-10V Dimming  Kpọtụrụ ugbu a
Enyemaka Ike DD Dimming IP67.  Kpọtụrụ ugbu a
100W Na-akwọ ụgbọ mmiri na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị mmiri IP67  Kpọtụrụ ugbu a
N'èzí Led Lighting Driver Constant Current / Voltage  Kpọtụrụ ugbu a
100W 54V Constant Current LED Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Okpokoro Driver nke Aluminom Aluminom  Kpọtụrụ ugbu a
Aluminom Ụlọ ikanam ọkwọ ụgbọala ugbu a  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwá Ọrụ Ike 48v Na-akwọ ụgbọ mmiri FD-36H-054B  Kpọtụrụ ugbu a
Nkọwa Onye ọkwọ ụgbọ ala nke Fighter LED Street na-enwu ọkụ bụ ọrụ ọkụ ọkụ site na ijikọ ọnụ-ọnụ na atụmatụ dị ọcha. Ọ na - enye ndị ahịa uru nke ọkụ ọkụ - belata ike ọkụ, ọrụ ogologo oge na mmezi obere. Mgbanwe, nchekwa, ntụkwasị obi, Faver Street...
Fahold Electronics Co., ltd redefine nka nke ọkụ ọkụ n’ime ụlọ, na-enye arụmọrụ dị elu na ọkwọ ụgbọ ala nke na-enweghị mgbagha maka ọkụ ọkụ, ọfịs ọfịs na ile ọbịa. Maka nnukwu mmiri ọkụ na ala bekee na-enye ọkụ na nnukwu ụlọ ọkụ, họrọ ndị ọkwọ...
Nkọwa: Usoro FD-200ExxxB na-arụ ọrụ site na ntinye 90 ~ 305 Vac. Ogige ndị a ga-enye 6A nke mmepụta ihe dị ugbu a na pọọlụ kachasị nke 54 V maka ike mmepụta kachasịnụ 200 W. Ezubere ha ka ha rụọ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi nke ukwuu. Atụmatụ ọkọlọtọ...
Nkọwa: Usoro FD-150ExxxB na-arụ ọrụ site na ntinye 90 ~ 305 Vac. Ogige ndị a ga-enye ihe ruru 4.5A nke mmepụta ma ugbu a na mgbapụta kacha elu nke 54 V maka ike mmepụta kachasịnụ 150 W. Ezubere ha ka ha rụọ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi nke ukwuu....
Nkọwapụta ngwaahịa FD-55H-42C , nke a kwadoro maka ọkụ ọkụ Windows, na-eduzi ọkụ ọkụ, iji rụọ ọrụ n'ozuzu ọhụụ n'èzí. Ngwunye nke mmiri IP67, na 0-10V, PWM, RX dimming, gafere Uti Certiication na 5years warranty.input 100-277V, nnukwu...
277Vac 1.2A mmepụta nke ọkwọ ụgbọala ngosi 36W ugbu a
IP67 Mmiri mmiri na-erughị 277V 0.6-1.2A arụpụta ọrụ ugbu a 36W ọkwọ ụgbọ ala na PWM Dimmable ọrụ Nkọwapụta ngwaahịa Ọkwọ ụgbọ ala Njirimara Ihe Echere Ugbu a 3 na 1 ọnọdụ dimming: 0-10V / PWM / RX Na-egbuke egbuke (0-100%) Mkpuchi Mpekere, Nchedo...
IP67 Ọkwọ ụgbọala na-agba 100W Maka ìhè obodo nke obodo
Nkọwapụta ngwaahịa FD-100H-054 , nke a kapịrị maka ọkụ ọkụ Windows, na-eduzi ọkụ ọkụ, iji rụọ ọrụ Ọhụụ Na-enwu n'èzí. Ngwunye nke mmiri IP67, na 0-10V, PWM, RX dimming, gafere Uti Certiication na 5years warranty.input 100-277V, nnukwu mmepụta...
transformer switch switch Dimmable Driver 100W
150W IP Rated Aluminom Didan Ọkwọ ụgbọala 0-10V dimming
Nkọwa: FD-160HxxxB Series na-arụ ọrụ site na ntinye ndenye 90 ~ 305 Vac. Nkeji nke a ga-enye ihe ruru 3.8A nke mmepụta ihe ugbu a na oke mmepụta voltage nke 54 V maka ike 160 W kachasị. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na ha....
240W Ọkwọ ụgbọala Aluminom dị na IP nke 0-10V Dimming
Nkọwa: FD-240HxxxB Series na-arụ ọrụ site na ntinye ndenye 90 ~ 305 Vac. Ngalaba ndị a ga-enye aka 7.5A nke mmepụta mmepụta ugbu a na ikike voltage kachasị elu nke 40 V maka 240 W oke mmepụta ike. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ...
Ebugharị na-emezi ihe ngosi redio 240W Street.
Ike Power Nye Street Light Driver
Enyemaka Ike DD Dimming IP67.
N'èzí Led Lighting Driver Constant Current / Voltage
Nkọwa: FD-36H-xxxB Series na-arụ ọrụ site na ntinye nhọrọ 90 ~ 305 Vac. Ngalaba ndị a ga-enye 0.9A nke mmepụta ihe ugbu a na volta voltage kachasị elu nke 115 V maka ikike nchịkwa kachasị elu 36 W. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ...
100W 54V Constant Current LED Driver
Nkọwa: FD-100H-xxxB Series na-arụ ọrụ site na ntinye ndenye 90 ~ 305 Vac. Nkeji nke a ga-enye ihe ruru 3.8A nke mmepụta ihe ugbu a na oke mmepụta voltage nke 54 V maka 100 W oke mmepụta ike. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na...
Okpokoro Driver nke Aluminom Aluminom
Nkọwa: Usoro FD-160H-xxxB na-arụ ọrụ site na ntinye ndenye 90 ~ 305 Vac. Ngalaba ndị a ga-enye aka na 4.4A nke mmepụta ihe ugbu a na voltage kachasị elu nke 42 V maka ikike mmepụta kachasị mma 160 W. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ...
Aluminom Ụlọ ikanam ọkwọ ụgbọala ugbu a
Ngwá Ọrụ Ike 48v Na-akwọ ụgbọ mmiri FD-36H-054B
Nkọwa Mee ka ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ site na ijikọta ọnụahịa na arụmọrụ dị ọcha. Ọ na-enye ndị ahịa niile uru nke ọkụ ọkụ - belata ike oriri, oge ogologo oge na obere mmezi. Na-agbanwe agbanwe, nchekwa, ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya,...
China Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ n'okporo ámá Ngwa
Site n'ichepụta usoro nhazi ụwa na akwụkwọ dị iche iche dịka EC, UL, FCC, TUV na SAA, a na-ere ahịa ụgbọala anyị na-eduga n'ahịa ma na-ebupụ ya na ahịa dị iche iche nke mba ụwa gụnyere US, UK, France, Germany, Australia, Africa, Korea. Anyị na-enye dịgasị iche iche nke ọkụ ọkụ ọkụ ngwọta nke na-agụnye LED Street Lighting ma ọ bụ System, LED Lams, LED linear wdg. N'otu oge ahụ Ichekwa ume na Meewanye mma nke ụgbọala gị na-arụ ọrụ site na anyị imebe ike ọkọnọ! Anyị Constant Ugbu a ikanam ọkụ Power Supply nso enye oju mmiri si 100mA ka 8000mA; mgbe ogwe ọkụ ọkụ na-agbanye ọkụ na ọkụ ọkụ na-amalite na 12V na-agafe 48V. Ma ụdị ikanam ọkụ ike ọkọnọ na-enye elu efficiencies, PFC, dị na klas P mmepụta; Ntụle IP maka ájá na mmiri site na IP20 ruo IP67 na nchebe maka mkpirikpi mkpirikpi, n'elu voltaji, n'elu ihe karịrị ọnọdụ okpomọkụ. Nhọrọ ndị ọzọ dị ntụgharị na PWM, 1-10V, Resistive ma ọ bụ triac na-arụ ọrụ ọrụ.
Ike nnyefe Ike 50W 1200Ma Led Driver Ike Enyemaka Na-arịwanye Elu